China Hexagon rotary hard barbell bar စက်ရုံနှင့် ပေးသွင်းသူများ |Yunlingyu
လေ့ကျင့်ခန်းစက်ဘီး အိမ်တွင်း ကြံ့ခိုင်ရေး...
ချော်လဲခြင်း မရှိသော လက်ကိုင်...
စက်ဝိုင်းပုံ hex barbell ဘား
ဆဋ္ဌဂံ လှည့်ပတ် ခဲဘားဘဲလ်ဘား
ထုတ်ကုန်အမည် ဆဋ္ဌဂံ လှည့်ပတ် ခဲဘားဘဲလ်ဘား
ကိုယ်အလေးချိန် အသားတင်အလေးချိန်: 26 ကီလိုဂရမ်
ဂေါ့အလေးချိန်: 27 ကီလိုဂရမ်
အရောင် အနက်ရောင်/အနက်ရောင်နှင့် လိမ္မော်ရောင်
အမျိုးအစား barbell ဘား
အခြား နံရံအထူ:3မီလီမီတာ
အလယ်ဘောင်လက်ကိုင်: 710 မီလီမီတာ
3 လက်ကိုင်အချင်း: 25mm/38mm/50mm
ထမ်းပိုး: 300 ကီလိုဂရမ်
သွပ်ရည်စိမ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်၊ ပတ်ဝန်းကျင် အရသာမရှိသော၊ သံချေးနှင့်ချေးများကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး 50 mm အလင်းဝင်ပေါက်ရှိသော barbell plates များ တပ်ဆင်ထားပါသည်။
တပ်ဆင်ဧရိယာနှင့် ထိန်းထားနိုင်သည့် ကြိုးများကို ပေါင်းစပ်ထားပြီး တာရှည်ခံသည်။
အလွန်ကောင်းမွန်သော ခေါက်ဆွဲမချော်သောလက်ကိုင်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပါဝါကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
ပစ်မှတ်လေ့ကျင့်ခန်းနေရာ- brachialis muscle. Brachioradialis brachialis biceps ကြွက်သားကိုလည်း လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။
1. မတ်တပ်ရပ်အနေအထား၊ ခြေဖဝါးကို ပခုံး-အချင်းအချင်းခွာကာ၊ စက်ဝိုင်းပုံတုံးကို လက်နှစ်ဖက်စလုံးဖြင့် ဒေါင်လိုက်ချုပ်ကိုင်ထားပြီး အလေးများကို မြှောက်ပါ။သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှေ့၊ လက်မောင်းအပေါ်ပိုင်းကို ခန္ဓာကိုယ်နှင့်နီးကပ်သော barbell ဖြင့် သဘာဝအတိုင်း ချပေးပါ။
2. မှုတ်သွင်းထားသောလေ၊ အပေါ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကွေးညွှတ်လိုက်သည်၊ ဘေးဘက်ရှိ biceps ၏ brachialis တင်းမာမှုကို ခံစားနိုင်သည်၊ အထွတ်အထိပ်ကျုံ့သွားမည့် အမြင့်ဆုံးအမှတ်ကို ခံစားနိုင်ပြီး၊ ခဏလောက် ဖိထားပြီးနောက် ၎င်းကို ဖြည်းညှင်းစွာ ပြန်ယူပါ။ လက်မောင်းကို အနိမ့်ဆုံးနေရာတွင် အပြည့်အဝ ဆန့်ထားသည်။
3. မူရင်းသို့ပြန်ယူပြီးနောက် ပြန်လုပ်ပါ။brachialis သည် biceps များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကနှေးကွေးသောကြွက်သားမျှင်ဖြစ်သောကြောင့်၊ လှုပ်ရှားမှုနှေးလေ၊ ပိုကောင်းသည်။
အထင်ရှားဆုံးဝိသေသဖြစ်ပြီး လူအများစုသည် ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများကို အသိအမှတ်ပြုကြသည်။ကြိုးဆွဲခြင်း၊ ကျောရိုးပေါ်ရှိ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို လျှော့ချရန်၊ လုပ်ဆောင်ချက်ပြီးမြောက်ရန် သင့်အောက်ပိုင်းခြေလက်ခွန်အားကို ပိုမိုအသုံးပြုရန် တွန်းအားပေးသည့်အခါတွင် ၎င်းသည် သင့်အား ကူညီပေးပါမည်။
ထို့ကြောင့်၊ အထွေထွေနည်းပြများသည် ဆွဲအားကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် သင်ပေးသည်၊ သို့မဟုတ် သင်က သရုပ်ပြရုပ်ရှင်ကို ဂရုတစိုက်ကြည့်သည်၊ မူအရ၊ barbell သည် ခန္ဓာကိုယ်နှင့် သိပ်မဝေးလှပါ။မင်းရဲ့ ခြေထောက်တွေ အပေါ်နဲ့ အောက်ကို ပိုနီးလေလေ ဆွဲငင်အားရဲ့ အလယ်ဗဟိုကို ထိန်းထားဖို့နဲ့ ကျောအောက်ပိုင်း ဒဏ်ရာ ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချနိုင်လေလေ၊
ယခင်- စက်ဝိုင်းပုံ hex barbell ဘား
နောက်တစ်ခု: ခေါက်ဘောင်ထိုင်ထိုင် ထိန်သိမ်း
1.5M မျဉ်းကွေး Olimpic bar